Mabhuku ese aLaura Gallego | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Donostia Cultura
Akazvarwa muna Gumiguru 11, 1977 muCuart de Poblet, guta riri muValencia, Laura Gallego ndomumwe vanyori vakanakisa vemabhuku evana nevechidiki yenyika yedu. Ane matatu emasaga ekunyora uye anopfuura makumi matatu akaburitswa mabasa kumashure kwake, Gallego akatanga basa rake mupasi rese retsamba kubvira achiri mudiki, aine gumi nematanhatu akanyorwa mabasa asina kumboona kupenya kwezuva kusvika Finis Mundi, rake rekutanga basa, akahwina 1999 Barco de Vapor Prize yakarongedzwa neSM yekutsikisa imba, achangopedza kuve rimwe remabhuku anozivikanwa aLaura Gallego.
Mudzidzi wePepaniki Philology uye anodisisa tsamba paInternet (munyori anga achitotungamira foramu yevanoda mabhuku mu2003 uye mushandisi anoshanda kwazvo pasocial network), Gallego anomupa basa rakanaka tints hafu pakati pesainzi yekunyepedzera neye medieval fungidziro asi iine yakawanda yekunzwa, kusiyana nemamwe mazita eiyo genre.
Kunyangwe Laura Gallego achigara achikunda mune zvinyorwa zvevechidiki, mabhuku evana vake anokurudzirwawo zvakanyanya.
Unoda kuziva ese mabhuku naLaura Gallego?
1 Mabhuku ese aLaura Gallego
1.1 Kuguma Kwenyika
2 Sagas emabhuku naLaura Gallego
2.1 Tower zvinyorwa
2.2 Ndangariro dzaIdhun
2.3 Sara nevanotora zvibodzwa
3 Mamwe mabhuku naLaura Gallego
Mabhuku ese aLaura Gallego
Basa rekutanga raLaura Gallego rakaunzwa kumakwikwi akasiyana siyana ezvekunyora kusvikira, pakupedzisira, muna 1999 akahwina mubairo weBarco de Vapor wakarongedzwa neimba yekutsikisa yeSM. Nzvimbo yekutanga yebhaibheri rinovimbisa iro rinoburitsa pachena bhuku iri rekushambadzira, iro rave kubudirira mushure mekuburitswa kwaro.
Kuguma Kwenyika, ChiLatin chirevo chinodenha apocalypse uye icho chingafungidzirwe naamai vemunyori, Marisa García, inotaura nyaya yemamongi Michel, ari weOrder yeCluny. Iyo protagonist iyo, ichitevera mirairo yenhengo Bernardo de Thuringia, inotanga kununura vanhu kusati kwasvika Apocalypse. Nzira chete yekuita izvi ndeye kukumbira Mweya weNguva. Sei? Kutsvaga matemo matatu akarara vhiri renguva. Basa rakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: The Axis of the Present, muna 997, the Axis of the Future, muna 998, inoitika muguta reSantiago de Compostela, uye The Axis of the Past, mugore ra999.
Sagas emabhuku naLaura Gallego
Laura Gallego akabuda mumabhuku ekufungidzira munyika medu nemazita ake mazhinji, asi kunyanya na saga dzaro nhatu: Makoronike eshongwe, Ndangariro dzaIdhún naSara uye ivo vakarova zvibodzwa.
Mushure mekubudirira kwaFinis Mundi, Laura Gallego akachinjira kumhando yekufungidzira neiyo trilogy Crónicas de la torre, ine mazita mana. Saga umo vatambi vayo vanotarisana nezviitiko zvisingaite vasina kusiya hunhu husipo pakati pevatsigiri vayo. Iyo heroine yenyaya iri Dana, mukadzi wechidiki anogara nevanin'ina vake asi ane hunyanzvi hunoshamisa hunomuita iye weirdo weguta rake.
Nekudaro, zvese zvinoshanduka kana zvisinganzwisisike Suren Tenzi, afunga kumutsvaga kuti amuendese ku Mupata weWolf, uko iyo Shongwe inogona kuve nzvimbo yakanaka yekuisa masimba ako kuyedza. Mushure mekupinda mukati, Dana anozokuperekedza Kai, shamwari yake isingaonekwe, kudzamara apinda muTower kwaanozotanga kudzidziswa kwake ne fenris elf. Sezvo rangano richienderera mberi, iyo Shongwe inoita kunge inoviga zvakavanzika zvakawanda izvo zvinoratidzwa kuna Dana muchimiro chemukadzi asinganzwisisike anonzi Aonia.
Mumabhuku ese anotevera, Dana, iyezvino Mukadzi weTorongo, akabvaruka pakati pekuda kwake Kai nemashiripiti eTorongo, mushure mekutarisana naMaster akamutora. Mabhuku esaga aive nemakadhi akasiyana (makumi maviri nemana ese) ekuzadzisa sezvo ese achiverengwa. Aya ndiwo mavhoriyamu anoumba saga:
Mupata weMapere (2000)
Kutuka kwatenzi (2002)
Kufona kwevakafa (2003)
Kunyangwe vazhinji vachibata bhuku rekupedzisira iri seimwe yeMakronike esaga saga, Laura Gallego akasimbisa pazviitiko zvakawanda kuti Fenris, elf inofanirwa kuve nemimba yega kubva kune mamwe mabhuku uye, kunyangwe, iverengerwe usati wapinda mudariro dzaDana.
Asina kusiya zvekufungidzira mabhuku, Gallego akazvinyudza zvekare mune trilogy nyowani, ino nguva yakaiswa pakati penyika mbiri: inoshamisa Idhún uye Pasi. Iye protagonist wenyaya ari Victoria, mukadzi wechidiki anobva kuMadrid uyo anoshandisa chikamu chehudiki hwake mumusha wenherera unotungamirirwa Allegra d'Ascolli, muroyi anotiza nyika yeIdhún, uko Ashran weNecromancer parizvino anotonga, uyo akabatanidza masimba emarudzi matanhatu enyika ino neiyo yezvisikwa-zvehumwari zvisikwa: unicorn, makava nemashekeri, anozivikanwawo seyenyoka ine mapapiro.
Mushure mekuona kuti ichokwadi nyuchi, Victoria timu inokwira Jack, dhiragoni yokupedzisira, uye mukristu, shekeri, uyo anogara naye mumusha wenherera. Kunyangwe paine hunhu hwakanyanya hwebhuku rekutanga, Ndangariro dzaIdhún dzinotaurira zviitiko zvevatatu vadziviriri kuti vadzorere runyararo uye kuenzana kupasi reIdhún.
Yekutanga vhoriyamu yeChirangaridzo cheIdhún yakashandurwa ikave graphic novel muna 2009. Aya ndiwo mazita akasiyana anoumba trilogy:
Sara nevanotora zvibodzwa
Mune saga iyi, Laura Gallego akachinja zvachose murume kana murume, achitamba nezvechikadzi muchikoro. Sara, mukadzi wechidiki akaguta nemagungano, anokumbira gadzira timu yenhabvu yevakadzi iyo inokwikwidzana neiyo yevakomana. Pakati pesaga tinopupurira shanduko yeiyi "mamaki", matambudziko avo uye nyaya dzerudo. Aya ndiwo mazita akasiyana:
Kugadzira timu (2009)
Vasikana varwi (2009)
Vatambi vepamusoro muligi (2009)
Nhabvu nerudo hazviwirirane (2010)
Vahori havaregi (2010)
Chinangwa chekupedzisira (2010)
Mamwe mabhuku naLaura Gallego
Pamusoro paFinis Mundi nemasaga ayo matatu, Laura Gallego akaburitsawo anotevera mabhuku nenyaya:
Dzokera kuchitsuwa chichena.
Nhoroondo yeMambo Anodzungaira.
Muunganidzi wemawadhi anoshamisa.
Mambokadzi weiyo ethereal.
Iko kuimba miti.
Mukundi weNational Prize yeVana neVechidiki Zvinyorwa 2012
Mu: Mangwana zvakadaro: Gumi nembiri dystopias yezana remakore rechiXNUMX.
Nderipi bhuku raunofarira naLaura Gallego?
Uye zvako mabhuku evechidiki vanosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku aLaura Gallego: fungidziro uye vechidiki adventures
Ndinokutendai nekupa mazita emazita aLaura Gallego García, uye rumwe ruzivo rwunokosheswa nekuda kwemabasa iwayo andaisaziva. Bhuku randinofarira? Kupfuura rimwe chete, raizove saga reChirangaridzo cheIdhún, zvakandibata panguva iyoyo, ikozvino mushure memakore gumi nemashanu, ndiri kuaverenga, handina kumbozvirangarira, izvozvi ndiri kuzotanga kuverenga Pantheon, chikamu chechitatu . Ini ndinofanira kubvuma kuti muhupenyu hwangu ndakaverenga yakawanda yekufungidzira, uye ini ndinofunga kuti pamwe neiyo trilogy ye "Ishe weRings", ini ndakanga ndisati ndambobatwa zvakadaro mune imwe nyaya. Ndatenda zvikuru Laura, nekugadzira nyika yakaita saIdhún uye hunhu hwakaita saVictoria. Uye nemazwi aya, andisingazive kana vachizosvika kuna Laura, ndinobva ndawonekana uye ndave kuda kuzvinyudza zvakare muIdhún!
Julua Lazaro Liceras akadaro
Ndiri kupedzisa «Makenduru maviri edhiabhori» ... ndinoida uye ndinoshamisika kuti kune kutaura nezvehutachiona uye nhenda ..., yakadaro yenyaya, zvinosuwisa ... ndiri kutarisira kuverenga mamwe mabhuku na munyori uyu
Pindura Julua Lázaro Liceras